कांग्रेसमा गुट परिवर्तनको लहर	| नेपाल इटाली डट कम
कांग्रेसमा गुट परिवर्तनको लहर
सरकारमा सहभागिता, नयाँ नेतृत्व चयनका नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा पटक–पटक गुट र गपगुट देखा पर्ने गरेका छन्। गुटउपगुटसँगै नेतृत्वमा रहनेहरू आफ्नो पक्षमा पार्न र केन्द्रीय नेताहरू नेतृत्वमा रहेका नेताहरूका पछि लाग्न तल्लीन देखिन्छन्।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेभित्र देखिएको दुई गुटको प्रष्ट रेखाङकनसँगै अब नेपाली कांग्रेसमा पनि गुट देखापरेका छन्। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबदवा रहने पार्टीमा खुलेर गुट नदेखिए पनि अहिले त्यसलाई भंग गर्दै खुलेरै गुट देखा पर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका गुटसँगै गुट परिवर्तनको लहर पनि चलेको छ। कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पक्षमा बाँडिएको गुटमा नयाँ मोड देखापरेको छ। कोइराला र देउवा नजिकिएका छन् भने अर्को गुट उनीहरूको विपक्षमा खडा भएको छ। पुत्री सुजातालाई पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा पठाएपछि कोइरालाले राजनीतिक जीवनमै पार्टीभित्रैबाट नराम्रो झड्का व्यहोर्नु पर्योा।
उनका विश्वासपात्र भनिएका सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलले साथ छाडिदिए। परस्परविरोधी सुशील र रामचन्द्र पौडेल एक भएका छन्। उनीहरूलाई प्रकाशमान सिंहले साथ दिएका छन्। पहिले देउवाको गुटमा रहेको र उनका विश्वासपात्र मानिएका गणेशमान पुत्र प्रकाशले देउवालाई त्यागिदिए। देउवासँगको झण्डै १५ बर्ष लामो सहयात्रा तोडिदिए।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता सिंहको साथ नपाउँदाकै कारण देउवा संसदीय दलको चुनावमा रामचन्द्र पौडेलबाट पराजित हुनुपरेको छ। दलको नेतामा भएको पराजयसँगै देउवा अहिले कुनै पनि पार्टीको बैठक तथा कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। देउवालाई विगतका विश्वासपात्रहरू डा. नारायण खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, दिपकुमार उपाध्यायलगायतले पनि साथ छाडिदिएका छन्। कांग्रेसभित्रका हस्तीहरू प्रकाशमान, पूर्णबहादुर खड्काको साथ नपाउँदा देउवालाई पछिसम्म घाटा पर्ने कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले बताए। कार्यकर्ता तहमा समेत लोकप्रिय मानिएका नेताहरूलाई पन्छाएर डा. प्रकाशशरण महत, डा. मिनेन्द्र रिजाललगायतलाई अगाडि बढाउनु देउवाका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। यतिसम्मकि उनको गुटको खम्बाहरू नै अविश्सनीय ढंगबाट गुट परिवर्तन गर्न पुगेको सुत्रको भनाइ छ। अहिले सुशील, रामचन्द्र र प्रकाशमानको संयुक्त गुट कांग्रेसमा हावी भएको छ। तीनै जना नेताहरूको पार्टीको तल्लो तहसम्म राम्रो पकड छ।
देउवालाई गिरिजापुत्री सुजाताको राम्रो साथ छ। तर, सुजाता आफैमा त्यत्ति बलियो नभएको बरु बाबुको कारण बलियो भएको देखिन्छ। तराईका लोकप्रिय नेता विमलेन्द्र निधिले भने देउवाको साथ छाडेका छैनन्। विगतमा आफ्नो गुटका हस्तीहरू विजयकुमार गच्छेदार र शरदसिंह भण्डारीले पार्टी छाड्दा नै देउवालाई घाटा लागेको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमले उनलाई शक्ति संचय गर्न लामै समय लाग्ने देखिन्छ।
यता सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला निराश भएका छन्। पार्टी देखिएको विवादबाट उनमा छाएको निराशासँगै उनले राजनीतिबाट सन्यास लिने मनिस्थितिसमेत बनाएको उनका नजिककाहरू बताउँछन्। सुजातालाई सरकारमा पठाएपछि कोइरालालाई टेको दिइरहनेहरूले नै साथ छाडेका हुन्। देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउने उनको इच्छा पूरा नभएपछि दबाब महसुस गरिरहेका छन्। कांग्रेसमा प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीको नेतृत्वमा अर्को वीचको धारमा हिड्ने समूह पनि पैदा भएको छ। नरहरि आचार्यले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि कोइरालाविरुद्ध गुट जन्मिएको महसुस गरिए पनि अहिले प्रष्ट रुपमा देखिएको छ। कांग्रेसमा सुजाताको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निणर्यसँगै आएको विवाद, संसदीय दलको नेतामा पौडेल निर्वाचित हुनु, दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व आएको विश्लेषण जे भए पनि शक्तिसन्तुलनमा पनि कांग्रेसभित्रै फेरबदल आएको छ। प्रकाशमान सिंह नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका छन्। सुशीलको वर्चश्व बढेको छ भने रामचन्द्र पौडेलका लागि पार्टीको सभापति बन्ने र भोलि परिआए सरकारको नेतृत्व गर्ने ढोका खुलेको छ।
राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन। गतिशील राजनीतिमा जे पनि हुन्छ। संक्रमणकालको चुनौती सामनासँगै परिवर्तनको प्रश्रव वेदनामा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र दोस्रो पुस्ताको उदयले नयाँ सम्भावनाहरू देखाएको छ।
कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र शेरबहादुर देउवा पक्षमा बाँडिएको गुट क्षतविक्षत भएको छ। संसदीय दलको नेताको निर्वाचनबाट गुटमा भन्दा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। गिरिजाबाबुको एकल नेतृत्वमाथि धक्का लागेको छ। पुत्री सुजाता कोइरालालाई सरकारमा पठाउँदा उनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ। ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र देउवा गुट बनाउन छाड’ भन्ने कार्यकर्ताको भवना मुखरित भएको छ। कांग्रेसका संघर्षशील नेता कार्यकर्ता गुट–उपगुटको विपक्षमा खडा भएको छ।
« माओवादी नेतृत्वमा संस्थापन बलियो
विदेशी झुक्याउन दस्तावेज लुकाइयो »